နိုင်ပန်းလှ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဒေါက်တာ နိုင်ပန်းလှ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မွေးနေ့ ၁၉၂၃ မတ်လ ၂ဝ
ကွယ်လွန် ၂၀၁၀ ဇွန်လ ၁၈
မွေးဖွားရာဒေသ ၊ မွန်ပြည်နယ်
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုတက္ကသိုလ်နှင့် တိုကျိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန် တက္ကသိုလ်
လူသိများခြင်းမှာ ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်း
နိုင်ပန်းလှကို ၁၂၈၄ - ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၄- ရက်၊ အင်္ဂါနေ့( ၂၀-၃-၂၃ )နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ် ဂျိုင်းမြစ်ကမ်းပေါ်ရှိ ကော့ဗိန်း(အိုးသည်ကုန်း)ရွာ၌ ရွာသူကြီး ဦးကြွနှင့် ဒေါ်ချိုတို့မှ ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်း ၇ ဦးအနက် စတုတ္ထမြောက် သား ဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်က ဖခင် တည်ထောင်ခဲ့သော ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် မွန်၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ များကို ဆရာတော် ဦးဝိသုဒ္ဓ ထံတွင် စတင်သင်ကြားခဲ့သည်။ ရွာရှိ အစိုးရအလယ်တန်းကျောင်းမှ စတုတ္ထတန်းအောင်မြင်ပြီး မော်လမြိုင် ကရင် ကေဘီအမ် အထကတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ရာ ၁၉၃၉ - ၄၀ ပြည့်နှစ်တွင် သတ္တမတန်း အောင်သည်။ ထိုနှစ်မှာ ရန်ကုန် သန်းခေါင်စာရင်းရုံးတွင် စတင် အမှုထမ်း သည်။ မကြာခင် မိဘများ ပြန်ခေါ်၍ မော်လမြိုင် အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းတွင် အဌမတန်းမှာ ပညာဆက်လက် သင်ယူခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှာ စစ်ဖြစ်လာ၍ ကော့ဗိန်းတွင် ပြန်နေရသည်။ ရွာတွင် အင်္ဂလိပ်စာကို ဒေါက်တာ သန်းမြင့်ထံ သင်ကြားရင်း ရွာရှိ ကလေးများအတွက် မွန်အမျိုးသားကျောင်း တည်ထောင်ပေးကာ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ မွန်စာပေများကို သင်ကြားပေးသည်။ ၁၉၄၆ - ခုနှစ် စစ်ကြီးအပြီးတွင် ရန်ကုန်သို့ တပည့်လေးယောက်ကို စရိတ်ခံ ခေါ်ယူကာ အပြီးအပိုင် ပြောင်းနေသည်။ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတွင် ၃ လကြာ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဓာတုဗေဒမင်းကြီး ရုံး၊ ဓာတ်ခွဲခန်း လက်ထောက်နှင့် ဒုတိယ စာရေးအဖြစ်အမှုထမ်းရင်း နိုင်ငံရေးမပါသော ရာမညမွန်အသင်းချုပ်တွင် အကျိုးဆောင် အတွင်း ရေးမှူးအဖြစ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်သောင်း (ဓာတုဗေဒမင်းကြီး) နှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သည်။
၁ မွန်ရိုးရာကို ထိန်းသိမ်းသူ
၂ ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်း
၄ တက္ကသိုလ် ဆရာဘဝ
မွန်ဘာသာ စကားသည် မထိန်းသိမ်းလျှင် အနှစ် ၄၀ အတွင်း ကွယ်ပျောက် တော့မည်ဟု အဆိုပါ အင်တာဗျူးတွင် ပြောထားပြီး The Nation သတင်းစာက မွန်ဘာသာ စကားကို ကယ်တင်သူ ဟူ၍ ရည်ညွှန်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှသည် ဂျပန်မှ ပြန်ရောက်ချိန်မှစ၍ ခေတ်ဟောင်းနှင့် ခေတ်သစ် မွန်ကျောက်စာနှင့် စာပေကို ရန်ကုန်မြို့တွင် သင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီး မွန်ပညာရှင် မျိုးဆက်သစ်များကိုလည်း မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်။
၂၀ဝ၉ အောက်တိုဘာလတွင် တစ်လကြာ ဆေးရုံတက်ရသည်။ လေဖြတ်ပြီး စကားသိပ်မပြောနိုင်တော့ချေ။ ဆေးရုံတွင် တစ်လနေပြီး ပြန်ဆင်းလာသည်။
ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့အနီးရှိ ပတ်လတ်ကျေးရွာမှ တွေ့ရှိရသည့် မွန်ပေမူကို အခြေပြု၍ မွန်နှင့် မြန်မာ ပေမူများ၊ ဦးကုလားရာဇဝင်၊ မှန်နန်းရာဇဝင်တို့နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ “ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်း” ကို ပြုစုခဲ့ရာ နောက်အကျဆုံးနှင့် အပြည့်စုံဆုံး ကျမ်းအဖြစ် ထင်ရှားသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်းကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် မွန်ဘာသာဖြင့် ရှင်းလင်းချက်များနှင့်တကွ မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသနအသင်းမှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နောင် ဆယ်နှစ် အကြာတွင်မှ မြန်မာဘာသာဖြင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ကရင် ကေဘီအမ် အထက်တန်းကျောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်းတို့တွင် ပညာသင်ယူသည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၌ မွန်ယဉ်ကျေးမှု အထက်တန်းအရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲအတွက် ၃ လကြာ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ တွင် အစိုးရဝန်ထမ်း အဖြစ်မှ အနားယူသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုတက္ကသိုလ်၌ ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရင်း သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ စာအုပ် ၄ အုပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ရှိ Pacific Western တက္ကသိုလ်မှ ယဉ်ကျေးမှု မနုဿဗေဒ အထူးပြုဖြင့် B.Sc. နှင့် Ph.D. ဘွဲ့များကို ဂုဏ်ထူးနှင့် ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် မွန်ဓမ္မသတ် ၁၁ မျိုးကို ကျမ်းပြုသဖြင့် ဥပဒေ ပါရဂူ (LL.D.) ဘွဲ့ကို ယင်းတက္ကသိုလ်မှပင် ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသည်။
ဒေါက်တာ နိုင်ပန်းလှသည် အသက် ၇၀ နားနီးတွင်မှ အဆင့်မြင့်ဘွဲ့များကို ဆက်တိုက် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုကီနာဝါကျွန်းရှိ မေယိုတက္ကသိုလ်၌ အမြဲတမ်း ပါမောက္ခအဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းဘာသာရပ်များကို ပို့ချပေးခဲ့သည်။ မြန်မာ့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဦးစီးဌာနတွင်လည်း သုတေသနမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သေးသည်။
သမိုင်းနှင့် မွန်-မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပညာရှင် ဒေါက်တာ နိုင်ပန်းလှသည် ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၀ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် လေဖြတ် ထားသည့် ဒဏ်ဖြင့် ကွယ်လွန် သွားသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၈၈ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ 
↑ ဒေါက်တာ နိုင်ပန်းလှ ၏ ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်ပန်းလှ&oldid=563277" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။